မျက်လုံးပါပြူး သွားတဲ့ အထိဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ နိုင်လူရဲ့ ဗီဒီယို – Cele Oscar
မျက်လုံးပါပြူး သွားတဲ့ အထိဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ နိုင်လူရဲ့ ဗီဒီယို
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် နိုင်လူ ဟာဆိုရင် လူကြမ်းမင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သလို ဗီလိန် ဇာတ်ရုပ်တွေကိုလည်း ပီပြင်ပြောင်မြောက်အောင် ဖန်တီးစွမ်းရှိသူ ဖြစ်ပါတယ် ။ သရုပ်ဆောင်တော်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ချီးကျူးမှုကိုပါရရှိနေတဲ့ နိုင်လူက ဗီဒီယိုဇာတ်ကား တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ အများအပြားကို ရိုက်ကူးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာ လည်း နိုင်လူက သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ပါ ဆောင်ရွက်ပြီး ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးနေ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယခုအချိန်အထိ တည်ကြည်ခန့်ညား နေဆဲဖြစ်တဲ့ နိုင်လူကတော့ ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ဘဝလေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလော မှာဆိုရင် နိုင်လူက Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေ မကြာခဏ ရိုက်ကူးပြီး အောင်မြင်ေ နတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူများတွေ နဲ့မတူအောင် အိုင်ဒီယာ အသစ်တွေနဲ့ အပီအပြင်သရုပ်ဆောင်ပြီး ရိုက်ကူးလေ့ရှိ တဲ့ နိုင်လူ့ရဲ့Tik Tok ဗီဒီယိုတွေက ပရိသတ်ေ တွကြားမှာ ကြည့်ရှု သူများပြားနေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုလည်း နိုင်လူက မင်းသမီးချောလေး မမဆောင်း ရဲ့အသံကိုနောက်ခံထားပြီး အခွီ;တလိုင်း ဗီဒီယိုလေး တစ်ခုကို ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ မမဆောင်းက မကြာသေး ခင်ကပဲပုံတင်ရင်းနဲ့ မပေါ်သင့်တာပေါ်သွားလို့ ပရိသတ် တွေကို ပြန်ရှင်းပြနေတဲ့အသံကို နိုင်လူ ကနားထောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့လည်း ရုတ်တရက်ကြီး မမဆောင်း ပြောချလိုက်တဲ့ စကား တစ်ခွန်းကြောင့် နိုင်လူပါ မျက်လုံးပြူးသွားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် နိုင်လူရဲ့ဟာသ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော် ။
ပရိတျသတျကွီးရေ…. ဇာတျပို့ သရုပျဆောငျ နိုငျလူ ဟာဆိုရငျ လူကွမျးမငျးသား တဈဦးဖွဈသလို ဗီလိနျ ဇာတျရုပျတှကေိုလညျး ပီပွငျပွောငျမွောကျအောငျ ဖနျတီးစှမျးရှိသူ ဖွဈပါတယျ ။ သရုပျဆောငျတျောလှနျးလို့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ခြီးကြူးမှုကိုပါရရှိနတေဲ့ နိုငျလူက ဗီဒီယိုဇာတျကား တှနေဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှေ အမြားအပွားကို ရိုကျကူးခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ ။ လကျရှိမှာ လညျး နိုငျလူက သူကိုယျတိုငျ ဒါရိုကျတာ အဖွဈပါ ဆောငျရှကျပွီး ကွျောငွာတှေ ရိုကျကူးနေ တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ယခုအခြိနျအထိ တညျကွညျခနျ့ညား နဆေဲဖွဈတဲ့ နိုငျလူကတော့ ခဈြရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ သာယာပြျောရှငျဖှယျ ကောငျးတဲ့ ဘဝလေးတဈခုကို တညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ လတျတလော မှာဆိုရငျ နိုငျလူက Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတှေ မကွာခဏ ရိုကျကူးပွီး အောငျမွငျေ နတာ ဖွဈပါတယျ ။ သူမြားတှေ နဲ့မတူအောငျ အိုငျဒီယာ အသဈတှနေဲ့ အပီအပွငျသရုပျဆောငျပွီး ရိုကျကူးလရှေိ့ တဲ့ နိုငျလူ့ရဲ့Tik Tok ဗီဒီယိုတှကေ ပရိသတျေ တှကွားမှာ ကွညျ့ရှု သူမြားပွားနေ တာလညျး ဖွဈပါတယျ ။
အခုလညျး နိုငျလူက မငျးသမီးခြောလေး မမဆောငျး ရဲ့အသံကိုနောကျခံထားပွီး အခှီ;တလိုငျး ဗီဒီယိုလေး တဈခုကို ရိုကျကူးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ မမဆောငျးက မကွာသေး ခငျကပဲပုံတငျရငျးနဲ့ မပျေါသငျ့တာပျေါသှားလို့ ပရိသတျ တှကေို ပွနျရှငျးပွနတေဲ့အသံကို နိုငျလူ ကနားထောငျနတော ဖွဈပါတယျ ။ ဒါပမေဲ့လညျး ရုတျတရကျကွီး မမဆောငျး ပွောခလြိုကျတဲ့ စကား တဈခှနျးကွောငျ့ နိုငျလူပါ မကျြလုံးပွူးသှားခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ သရုပျဆောငျ နိုငျလူရဲ့ဟာသ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျနျော ။
မွန်းကြပ်မှုတွေ နဲ့ဝေးရာကို သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ စိတ်လွတ်လက်လွတ် ခရီးတိုလေး ထွက်ခဲ့တဲ့ မိုးဟေကို